Ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo hawlgalo ka bilaabay Beledweyn. [Akhris …] – Radio Daljir
Ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo hawlgalo ka bilaabay Beledweyn. [Akhris …]
Beledweyn, July 26 – Ciidamada dawladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa saakay waabarigii hawlgalo ballaaran ka bilaabay gudaha magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaanna dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyn halkaasi oo ay ku xoog badan yihiin Islaamiyiin dawladda ku kacsan waxaana hawlgalkaasi uu dhaliyey dagaal xooggan oo dhaxmara labada dhinac.
Hawlgalka oo ahaa mid dawladdu ay micneeyey adkaynta ammaanka ayaa laga bilaabay deegaanno ay ku xoog badan-yiin islaamiyiin ka tirsan ururada Al-shabaab & Xisbul islaam, halkaasi oo ay ka dhaceen dagaallo xooggan oo u dhaxeeyey dawladda iyo kooxaha mucaaradka dagaalkaasi oo labada dhinac ay isku adeegsadeen dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan wararka laga helayo gobolku
Qaar ka mid ah saraakiisha Ciidamada dawladda KMG ah ee ku sugan goobaha lagu dagaalamayo ayaa sheegtay in ay isku ballaariyeen dhammaan xaafadaha ku yaalla Galbeedka magaalada Beledweyn ee ay ku sugnaayeen islaamiyiintu, taasi oo micnaheedu yahay in ay ka itaal roonaadeen xooggagii mucaaradka ee ay la dagaalameen, waxaana ay saraakiisha dawladdu ay intaasi ku dartay magaalada Beledweyn oo dhan in ay dawladdu hadda gacanta ku hayso isla markaana uusan jirin wax dagaal ah oo socda.
Dhinaca kooxaha islaamiyiinta ah gaar ahaan kuwa ururka Xisbul islaam, oo ay idaacadda Daljir la xiriirtay ayaa dhankooda sheegtay in ay wali ku sugan yihiin goobahoodii isla markaana ay iska caabiyeen ciidankii dawladda ee soo weeraray.
Dadka deegaanka oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir ayaa sheegay in dhammaanba xaafadaha magaalada Beledweyn laga maqlayey daryanka madaafiicda ay is weydaarsanayaan ciidanka dawladda iyo kuwa xooggaga ururada islaamiyiinta ah ee dawladda ku kacsan, waxaana dadka deegaanku ay intaas ku sii dareen ciidanka dawladda in ay u soorto gashay in ay isku gadaamaan gabi ahaanba xaafadaha ku yaalla Galbeedka magaalada Beledweyn.
Ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkii saakay ee u dhaxeeyey ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kooxaha islaamiyiinta ah ee dawladda ku kacsan waxaase gudaha magaalada Beledweyn laga dareemayaa xiisad iyo dhiilooyin colaadeed oo aad u xoog badan.